सुदूरपश्चिमको दोस्रो जिल्लाका रुपमा बैतडी साक्षर घोषणा
कालोपाटीमा पढाएर दक्ष जनशक्ती उत्पादन नहुने : शिक्षा मन्त्री पोखरेल
डि.आर. भट्ट, बैतडी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको दोस्रो जिल्लाका रुपमा बैतडी जिल्लालाई साक्षर घोषणा गरिएको छ । बैतडीमा १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका नागरीक मध्ये ९६.३५ प्रतिशत साक्षर रहेकोले बैतडी जिल्लालाई प्रदेश कै दोस्रो साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको हो । पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषण गर्न आवश्यक सबै सूचक पूरा भए सँगै शुक्रबार बैतडीलाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई बैतडीका प्रमुख नरेन्द्र अवस्थीले जानकारी दिनुभयो ।
वि.सं. २०६८ सालको जनगणना अनुसार बैतडीमा २ लाख ५० हजार ८ सय ९८ जनसंख्या रहेको थियो । गत असार मसान्तमा बैतडी जिल्लाका १० ओटै स्थानीय तह साक्षर घोषणा गरिएका थिए । साक्षर जिल्ला घोषणा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले सुदूरपश्चिम प्रदेशको बैतडी दोस्रो साक्षर जिल्ला घोषणा भएकोले निकट भविष्यमा तीब्र विकास हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
यस्तै, कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ बैतडीका प्रमुख नरेन्द्र अवस्थीले बैतडीले शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ फड्को मारेको बताउँदै साक्षर जिल्ला घोषणा गर्नमा सहयोग गर्ने सबै पक्ष प्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्नु भयो । कुनैपनि जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्नका लागि १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका नागरीक मध्ये कम्तीमा पनि ९५ प्रतिशत साक्षर हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले कालोपाटिमा पढाएर दक्ष जनशक्ती उत्पादन नहुने बताउनु भएको छ । साक्षर जिल्ला घोषणा कार्यक्रममा बैतडी पुग्नु भएका मन्त्री पोखरलले पाटन नगरपालिका अन्तर्गतको नुमना विद्यालय ज्ञानेश्वर माविले गरेको स्वागत कार्यक्रममा बोल्दै सो कुरा बताउनु भएको हो ।
प्राविधिक शिक्षाका लागि प्रयोगशाला नितान्त आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्री पोखरेलले शिक्षकले जागिरका लागि नभइ नयाँ पुस्तालाई बलियो बनाउन अध्यापन पेसा अँगाल्नु पर्ने बताउनु भयो । प्राविधिक शिक्षा आजको आवश्यकता भएको दाबी गदै उहाँले प्राविधिक शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन दक्ष शिक्षक र पर्याप्त स्रोत साधन पनि अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रवार, बैशाख ६, २०७६, १०:०४:००